Brainstem reticular गठन केन्द्रिय भागहरु (thalami, midbrain र medulla) मा स्थित plexiform को गठन, तन्त्रिका संरचना को अधिकता छ। यसलाई बनाउन, न्यूरन्स आकार, neurite लम्बाइ, संरचना मा फरक हुन्छन्। आफ्नो बाक्लो बुनाई मनाइन्छ।
को reticular गठन को कार्य
गठन भएको मस्तिष्क hemispheres मा cerebellum, मेरुदण्ड, Cortex सम्बन्धित छ, प्रणाली (शरीर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान) को limbic। को जाल को गठन मा उक्लनुभन्दा (afferent) र (efferent) दलहन घट्दो अन्तरक्रिया गर्नुहोस्। को दलहन निरन्तर चलिरहनु र तन्त्रिका सर्किट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, स्थिर आन्दोलन केही स्तरमा reticular गठन न्यूरन्स प्रदान गरिएको छ। परिणाम केन्द्रीय स्नायु प्रणाली को विभिन्न विभागहरु को गतिविधिहरु गर्न एक निश्चित प्रतिबद्धता छ। को जाल गठन छाल hemispheres लगे छ को excitation को डिग्री समायोजन।
Reticular गठन प्रदान वा स्पाइनल मोटर प्रतिक्रिया मा inhibitory प्रभाव सुविधा सक्षम क्षेत्रहरु comprises।
पहिलो पटक स्पाइनल reflexes र जाल गठन विभिन्न क्षेत्रको उत्तेजना सम्बन्ध आई एम Sechenovym पत्ता थियो। त्यसपछि, कर्मचारीहरु को सहायता संग अमेरिकी neurophysiologist Megounom स्पष्ट Sechenov को अवलोकन द्वारा सचित्र थियो।
यसरी, anesthetized बाँदर र बिरालोहरु मा medial क्षेत्र को विद्युत उत्तेजना आन्दोलन पूर्ण समाप्ति, एक सहज क्रिया रूपमा त्यहाँ छ जब, र मस्तिष्क Cortex को मोटर क्षेत्र को उत्तेजना हुन्छ। यसरी reticular गठन provokes सबै ब्रेक घटना, जलन भइरहेको छ, प्रकृति मा द्विपक्षीय छन्।
को पार्श्व reticular गठन, को बाह्य मा क्षेत्र एक inhibitory प्रभाव क्षेत्र exerting उजागर गर्दा स्पाइनल मोटर गतिविधिमा प्रभाव सुविधा पत्ता लाग्यो।
को reticular गठन फरक स्पाइनल शिक्षा मा काम गर्न सक्षम छ।
यो जाल गठन को क्षेत्र, मोटर गतिविधिमा सुविधा प्रभाव possessing anteriorly विस्तार गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी, यो मात्र होइन क्षेत्र को medulla oblongata को, तर यो midbrain र Pons।
नेट शिक्षा मांसपेशी टोन असर गर्न सक्छ। यो खुला स्थिति आर ग्रेनाइट। स्विडिश neurophysiologist को reticular गठन गामा मोटर न्यूरन्स को गतिविधि प्रभावित कि देखाए। आफ्नो axons तथाकथित "intrafuzarnym" मांसपेशी फाइबर पास र शरीर आन्दोलनहरु र postures को चरण को नियम मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेती।
को reticular गठन विभिन्न क्षेत्रमा यसको क्षेत्र सबै आकर्षक, को मस्तिष्क Cortex को सामान्यिकृत प्रकृति मा एक उत्तेजक प्रभाव पार्न सक्छ।
रगतमा परिसंचारी विभिन्न रासायनिक तत्व गर्न कायम राख्न जाल गठन गतिविधि र संवेदनशीलता humoral कारक द्वारा बाहिर छ (कार्बन डाइअक्साइड, catecholamines, आदि ..)। यो, बारी मा, केही autonomic कार्यहरु को नियम मा reticular गठन को एकीकरण योगदान पुग्छ।
यसलाई अन्य subcortical संरचना संग जाल गठन को सम्बन्ध को अध्ययन, यसले हामीलाई व्यक्तिगत अमेरिका (दुखाइ, उठ्दै, सुत्न, सतर्कता, भावनात्मक र प्रेरक राज्य अमेरिका र अरूलाई) को प्रकृति को neurophysiological तंत्र को गुण परिष्कृत गर्न अनुमति कि उल्लेख गर्नुपर्छ। चिकित्सा अध्ययन प्रयोगको केही चिकित्सा समस्या एक नयाँ दृष्टिकोण परिभाषित, CNS pathologies को व्यक्तिगत उपचार प्रकट गर्छ।
अडिट को पद्धति
Schrodinger सिद्धान्त: वर्णन, सुविधाहरू, र आवेदन प्रयोग
सापेक्ष सत्य र निरपेक्ष सत्य। को दर्शन मा रिपोर्ट को लागि सामाग्री
चाँदी को शोधन: घर मा
गायक सर्गेई Chelobanov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, काम
आधुनिक सिनेमा। एक रोमाञ्चक के हो?
स्टेडियम "Spartak" (मास्को): निर्माण र खोल्दै। मास्को मा नयाँ स्टेडियम को फोटो
घरमा एक फोहरा कसरी बनाउने? आफ्नै हातले सजावटी कोठा फोहरा
कम्प्युटर आफ्नै हात शक्ति आपूर्ति मर्मत। ड्राइभिङ एकाइ
"Centrum" - भिटामिन
के सबैलाई थाहा छ कि कसरी राम्रो तरिकाले हुप मोडिन्छ?